Jeju Nohyeong Howl Sokchae
Nohyeong-dong, Cheju, Jeju Province, South Korea
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe ongu지현
Mholweni. Le yiNdlu yoKhetho loSapho lwaseNohyeong !!
Ime kumbindi weJeju kwaye yimizuzu eli-10 kuphela ngemoto ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya.
Abakhenkethi abakufutshane babandakanya iArboretum, iDodubong Peak, i-Iho Teuiho Beach, iLove Land, iGoblin Mystery Road, iJeju City Coast Road,
Ikwindawo ekufutshane neendawo zokutyela ezahlukeneyo ezifana neNuwemor Street (iSitrato saseGubaozen).
Izaphulelo ezinkulu zentengiso zibandakanya i-E-Mart, iLotte Mart, kunye neNonghyup Hanaro Mart.
Nge-2nd, 7th, 12th, 17th, 22nd kunye 27th yenyanga nganye, iJeju City Folk Oil Market ikufuphi, iyenza ibe lula ukuthenga.
Indawo yokuthengisa / idilesi 3rd umgangatho, 1053-6 Nohyeong-dong, Jeju-si, Jeju-do okanye 3 Wollang-ro 6-gil
Uhlobo (Inye/iVilla/Indlu yasefama/iApartment) Kuwo wonke umgangatho wesi-3
Igumbi/iToilet/Igumbi lokuhlala/Ikhitshi amagumbi amathathu okulala (onke amagumbi okulala), igumbi lokuhlala eli-1, ikhitshi eli-1, igumbi lokuhlambela eliyi-1
Iyonke indawo yomgangatho 50 pyeong 3rd umgangatho umgangatho indawo 25 pyeong
Ungaziva ukhululekile njengakwelinye ikhaya kude nekhaya.
Amagumbi ayi-3 aneebhedi ezi-4 ezitofo-tofo zokuphelisa ukudinwa, kwaye zonke izixhobo zasekhitshini zinikezelwe.Ikhitshi inetafile yokutyela yohlobo lwaseNtshona kwaye igumbi lokuhlala linetafile yokutyela yohlobo lwaseKorea.
Sibonelela ngegumbi lokuhlambela labucala kunye nezicoci ezikumgangatho ophezulu.
Ukufudumala kukufudumeza komntu ngamnye, ngoko ke undwendwe lunokulungelelanisa ubushushu bangaphakathi kunye nobushushu bamanzi njengoko kuthanda.
Igumbi lokuhlambela libonelela ngokuhlamba umzimba, ishampu kunye ne-conditioner, njl.
Ikumgangatho we-3, ngoko ke umbono awuphazamiseki. Xa uvula iikhethini, konke ukukhanya kwelanga kungena.
INohyeong Howl ikufuphi nesikhululo seenqwelomoya, kwaye iSibhedlele esiPhakathi saseHalla kunye neSibhedlele esiPhakathi esiPhakathi sikufuphi, kwaye sisembindini weJeju. Iivenkile ezinkulu ezinezaphulelo ezinje nge-E-Mart, iLotte Mart, kunye neendawo zokutyela ezinexabiso eliphantsi zidityaniswe kwindawo ejikelezileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- 지현
Xa ndandiselula, ndanceda abazali bam ukuba benze ifama yetangerine, eyayibalasele kulawulo lwehotele, yaye emva kweminyaka eli-14 yamava kwihotele yodidi oluphezulu ephondweni, ndaqalisa ukuqhuba iJeju Howl. Ndiyazi ngokusekwe kulwazi olwahlukeneyo, kwaye ndiya kwenza konke okusemandleni am ukunceda.
Xa ndandiselula, ndanceda abazali bam ukuba benze ifama yetangerine, eyayibalasele kulawulo lwehotele, yaye emva kweminyaka eli-14 yamava kwihotele yodidi oluphezulu ephondweni…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nohyeong-dong, Cheju